Meghan Markle ရောင်းချရန်မိမိအိမျတက်တတ်၏ - Sussex Duchess အိမျတျောကိုလိုခငျြပါဘူး - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Meghan Markle ရောင်းချရန်မိမိအိမျတက်တတ်၏ - Sussex ၏ Duchess အိမျတျောကိုလိုခငျြပါဘူး
Meghan Markle ရောင်းချရန်မိမိအိမျတက်တတ်၏ - Sussex ၏ Duchess အိမျတျောကိုလိုခငျြပါဘူး
Tele RELAY တစ်ခု7သြဂုတ်လ 2019
Meghan Markle သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူဒီနေရာမှာနေထိုင်ခဲ့ (Image: Daily သတင်းစာ Express ကို)
ယခင်ရုပ်မြင်သံကြားမင်းသမီး Hancock ဟာပန်းခြံမှပြန်လာစဉ်ကတည်းကရှည်လျားသောလမ်းလာခဲ့ပါသည်။ ယခုသူ၏ "အိမ် starter" ကယ်လီဖိုးနီးယားသင် 1,5 သန်းပေါင်ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ Meghan ခေတ္တမျှသူမ၏ပထမဦးဆုံးခင်ပွန်းနှင့်အတူ shared လေးပါးအိပ်ခန်းရောင်းချမှုအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာကိုလိုနီပိုင်ဆိုင်မှု2262 စတုရန်းပေ 1924 built-in ခဲ့သည်။ ဒါဟာသံမဏိကရိယာ, စကျင်ကျောက်ကောင်တာများနှင့်အတူကြီးမားတဲ့မီးဖိုချောင်အပါအဝင် parquet ကြမ်းပြင်နဲ့အကြီးအရဲ့အရွယ်အစားကိုဖွင့်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ နှင့်ရွှေချုံ့။ မြေညီထပ်, ကျယ်ဝန်း, တောက်ပအိမ်များတစ်မိသားစုအခန်းတစ်ခန်းတစ် quaint မီးဖို, ကြော့အဖြူရောင်မှိုနှင့်မြင့်မားသောမျက်နှာကျက်။
အဆိုပါ shaded ထိုင်ခုံဧရိယာအထက်နေနှင့်စွန်ပလွံပင်တစ်စက္ကန့် Lounge နဲ့အလတ်စားဥယျာဉ်တော်မှလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
သူမ suite တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍဆိုက်ရောက်လာသောအခါ Meghan Markle အနည်းငယ်-လူသိများမင်းသမီးခဲ့ (ရုပ်ပုံ: အား NBC / Universal မီဒီယာ)
Meghan fleetingly သူမကအဲဒီမှာနေထိုင်ခဲ့ထိုအချိန်ကသူမသည်အသုံးမဝင်တော့ယခု, သူ့ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းအားဖြင့်သူမ၏လူနေမှုရရှိခဲ့ပြီး, အဆိုပါ Tig ချေါပွီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်များတွင်ကျမ်းပိုဒ်အတူဆေးပညာဆိုင်ရာဒရာမာအတွက်မင်းသမီးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Meghan Markle နှင့်သူမ၏ပထမဦးဆုံးခင်ပွန်း Trevor Engelson (ရုပ်ပုံ: GET ty မှတဆင့် Billy Farrell / ပက်ထရစ် McMullan)
ယခုနှစ် 2011 နှင့် Sussex ၏အနာဂတ် Duchess စက်တင်ဘာလ၌ဂျမေကာမှာရှိတဲ့ပေါ့ပေါ့ကမ်းခြေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူ Trevor Engelson လက်ထပ်ခဲ့သည် .
သူမကသူမ၏သရုပ်ဆောင်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အခါ Sussex ဟောင်း 38 ၏ Duchess, 42 အတွက် Trevor ဟောင်း 2004 နှစ်ပေါင်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
Meghan သည်သူ၏ကြီးမားသောချိုးရှာဖွေနေစဉ်သူတို့ဟာ 2011 အတွက် Hancock ဟာပန်းခြံသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Meghan ကိုခေါ်သစ်တစ်ခုဥပဒေရေးရာဒရာမာ suite အတွက်ရာခေလသည် Zane ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆိုက်ရောက်လာသောအခါထိုစုံတွဲအမှန်တကယ်ခညျြနှောငျပါလိမ့်မည်မတိုင်မီနှင့်ဤသုံးလဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဒါဟာ Trevor ကသူ့ဇနီးအသစ်မပါဘဲအိမ်မှာအချိန်အများကြီးသုံးစွဲခဲ့မူကြောင်းကိုပြောမျှတသည်။
"ဟုသူမက suite အတွက်အခန်းကဏ္ဍအနိုင်ရသည့်အခါ, Meghan တရားဝင်ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌တစ်အနုပညာရှင်ဖြစ်လာနေပါတယ်" ဟုသက်ဆိုင်ရာတော်ဝင်အက်ရှလေ Pearson ကပြောပါတယ်။ suite New York မှာရာအရပ်ကိုကြာပေမယ့် ", အရိုက်ကူးရေးအများစုတိုရွန်တိုနေရာ ယူ. Meghan လအနည်းငယ် Trevor ရန်သူ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက်ကနေဒါမွို့၌အခြေချရန် Hancock ဟာပန်းခြံထားခဲ့တယ်။
ဟယ်ရီနှင့် Meghan နေထိုင် Frogmore အိမ်တွင်း (ရုပ်ပုံ: Getty)
"ဒါဟာသူမတစ်ဦးကအနီရောင်ကော်ဇောကိုခေါ်ခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူမပိတ်မိနေခဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူမအဘို့အကြီးမားတဲ့ညှိနှိုင်းမှုကြီးနှင့်အရာခပ်သိမ်းသည်အိမ်တော်အပြင်ဘက်တွင်သွားလေ၏။ "
ရုံ 18 လကြာပြီးနောက် 2013 အတွက် Meghan ကွာရှင်းမှုအတွက်တရားစွဲဆို - "ဖျက်သိမ်းကွဲပြားခြားနားမှု" ကိုးကားပြီး
အင်ဒရူး Morton 2018 Meghan အားဖြင့်အတ္ထုပ္ပတ္တိအဆိုအရ: တစ်ဦးကဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး, Hancock ဟာ Park မှာသူမ၏ခင်ပွန်းသူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားအကျပ်အတည်း၌ပါသောမသိခဲ့ပါ။
အဆိုပါ Duchess လုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲကိုးနှစ် '' သူမ၏ရည်းစားပစ်ချကြလိမ့်မယ် "နှင့်မေးလ်၌သူ၏ပဋိညာဉ်တရားကိုနှင့်သူ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကွင်းကိုလည်း လုပ်. ပါလိမ့်မည်။
Trevor ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကထုတ်လုပ်သူခံစားမှုကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် "ဟုသူ၏ဖိနပ်၏အောက်ခြေမှဖမ်းတစ်ခုခုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်လျှင်အဖြစ်။ "
အလှမယ် Pearson ကဆက်ပြောသည်: "လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့ပြဿနာအကွာအဝေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးတာနဲ့သူမ suite အပေါ်တစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲခဲ့ရပြီးသူမတိုရွန်တို၌ရှိ၏နှင့် LA က၌ရှိ၏။ ဆက်ဆံရေးရုံကြာရှည်မထားဘူး။ "
သူမဟာသူတို့ရဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးနေထိုင်ရာ, Meghan အဖြစ်တိုရွန်တိုကို ရွေးချယ်. နှင့်သူမ၏ဟောင်း Hancock ဟာငှားရမ်းခဲ့သည်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေပေါ်မှာအခြေစိုက်စခန်းထားရန်အကူအညီလိုအပ်နေသူ။ ကရောင်းမတိုင်မီပန်းခြံ။
သူတို့ရဲ့ကလေး, Archi, ခရီးသွားလာရန်လုံလောက်သည်အိုသောအခါ Meghan နှင့်ဟယ်ရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်တော်ဝင်ခရီးစဉ်စီစဉ်နေကြသည်။
Meghan Trevor မီးဖိုချောင် (Image: Daily သတင်းစာ Express ကို)  ဒါဟာမှတ်တိုင်တွေထဲကဟောလိဝုဒ်ရှိသူ၏ဟောင်းနွမ်း stomping မြေပြင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဒါပေမယ့်ကောလဟာလကိုလည်းတော်ဝင်စုံတွဲ Meghan, Doria Ragland ၏မိခင်မှပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ် Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ယူရန်စီစဉ်နေသူကပြောပါတယ်။
"Meghan ကျိန်းသေ LA ကအတွက်နေရာတစ်နေရာလိုလား - သူမကမြို့ချစ်သောသူသည်ယင်း၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်၎င်း၏ရာသီဥတု" ဟုသတင်းရပ်ကွက်ကပြောသည်။ "အဆုံးစွန်သောကြောင့်တစ်ဦးကယ်လီဖိုးနီးယားမိန်းကလေးရဲ့အရှိကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာရှူနိုင်ပါသည်။ "
Meghan Markle ၏  ဟောင်းများအိမ်ပြန် (Image: Daily သတင်းစာ Express ကို)
ယခုအဘို့, Meghan Frogmore အိမ်တွင်းနှင့်အတူပြုကြစေမည်, အဆင့် II ကိုအသစ်လက်ထပ်ဝင်ဆာရဲတိုက်, Susse ၏ Duchess ၏နေအိမ်အနီးတွင်တည်ရှိသည်အိမ်သူအိမ်သားစာရင်း။ Meghan ဒီနှစ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အခွန်ထမ်းများကငွေကြေးထောက်ပံ့ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်စဉ်အတွင်း£ 2,4 သန်းအထိပမာဏ, ငါးကပ်လျက်အိမ်များကြီးမားတဲ့ "အိမ်တွင်း" သို့စုဝေးခဲ့ကြသည်။  ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထုပ်နှင့်ကြမ်းပြင်အိမ်တော်၌အစားထိုးခဲ့အသစ်တစ်ခုရေဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ installed ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်သူအိမ်သား 10 အိပ်ခန်းအသစ်ရေချိုးခန်းနှင့်ဇိမ်ခံမီးဖိုချောင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
Meghan ၏ယခင်အိမ်သို့ en-suite ကိုရေချိုးခန်းနှင့်အတူအိပ်ခန်းတစ်ခုမှာ (Image: Daily သတင်းစာ Express ကို)
အိမ်သူအိမ်သားလုံးဝ redecorated ခဲ့ပြီး ultramodern ပျိုးခင်းတော်ဝင်ကလေးအဘို့တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အများကြီး Meghan နှင့်ဟယ်ရီများအတွက်ပြုပြင်မှုများအပေါ်သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်သော်လည်းတစ်ဦးတော်ဝင်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Frogmore အိမ်ငယ်လေး "ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက်" ကြီးနှင့် Duke နဲ့ Duchess အားလုံးကို "သာယာအဆင်ပြေမှုများ" paid ကပြောသည်။
Meghan Markle ကသူ့မိခင်, Doria Ragland ရန်အလွန်နီးကပ် (ရုပ်ပုံ: စာနယ်ဇင်းအစည်းအရုံး)
အတော်များများပြောင်းရွှေ့ Meghan Hancock ဟာပန်းခြံပထမဦးစွာတိုရွန်တိုဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကိုထို့နောက်နှလုံးကြားမှကြောင့်ဖြစ်ကောင်းအနောက်ဘက်ကမ်းခြေမမြင်စဖူးသောနောက်ဆုံးအချိန်မဟုတ်ကြောင်းခန့်မှန်း။
ဒါဟာ Doria ဖို့အလွန်နီးကပ်နှင့်သူ၏မိခင်နှင့်သမီးထိုကဲ့သို့သောအကွာအဝေးကနေကွဲကွာရမည်ကိုမုန်း။
"Los Angeles မြို့ Meghan အတွက်အသုံးစရိတ်အချိန်မှာလည်းအနည်းငယ်လွတ်လပ်မှုနှင့်ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis စင်တာနှင့်စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ရေးခွင့်ပြု - ခြင်းနှင့်တဖန်သူ၏အသက်တာ၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သူ့ကိုပတ်လည်ရှိလူတွေ" ဟုကဆိုသည် အရင်းအမြစ်။
"ဒါဟာဗြိတိန်အတွက် Duchess ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူက Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့မိဖုရားဖြစ်လိမ့်မည်။ "
မိမိအ Maddox တောင်ကိုရီးယားမှာကောလိပ်သွား - ကလူ
ပြည်သူ့: Celine Dion Pepe Munoz ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ: Instagram ကို diva အပေါ် posted မက်ဆေ့ခ်ျကိုအပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့အမျက်ဒေါသ
L'expert royal déclare que le prince Andrew et son personnel seront expulsés du palais de Buckingham
အိန္ဒိယ - ကွန်ဂရက်အလုပ်ကော်မတီသို့မဟာရာရှထရာသဘောတူညီချက်လောင်းခြင်း အိန္ဒိယသတင်း
Michel Cymes - အင်တာနက်ပေါ်မှအစားအစာအကြံဥာဏ်များကိုဗွီဒီယိုကြည့်ပါ
LIVE Transfer Talk: မော်ရင်ဟိုသည်စပါးဘောလုံးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
တရားဝင် Android 10 ကို Samsung Galaxy Note9 နှင့် Galaxy S9 - VIDEO တွင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,792